Warbaahinta Al-shabaab oo si cajiib ah uga hadashay aragtidda ay ka qabaan madaxweyne Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Warbaahinta Al-shabaab oo si cajiib ah uga hadashay aragtidda ay ka qabaan madaxweyne Farmaajo
Warbaahinta Al-shabaab ayaa markii ugu horeeysay baahisay aragtidda ay ka qabaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo mowqifkooda ku aadan AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa sheegtay in qorshaha madaxweyne Farmaajo ee ahaa in dib loo dhisi doonno ciidamada qaranka Soomaaliya uu yahay mid fashil kusoo dhamaan doonno.
Qorshahaasi ayay ku tilmaameen inuu yahay mashruuc muddo dheer hore usoo socon waayay, islamarkaana aanay marnaba ishor taag lagu sameyn karin dagaalka ay sheegeen inay kula jiraan gaalo kusoo duushay dalka Soomaaliya.
Sidoo kale, waxay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu si gaar ah usoo dhaweysanaayo gaaladda AMISOM ee kusoo duushay Soomaaliya, isagoona xilli kasta uga mahad-celiya xasuuqa iyo gumaadka ay sheegeen in ciidankaasi ay dalka ku haayaan, waa sida ay Al-shabaab hadalka u dhigeene.
Dhinaca kale, Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii madaafiicda ahaa ee shalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaasi ayaa dhacay muddo saacad kadib markii ay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ka dhacday xaflad ay xilalka ku-kala wareegayeen madaxweynihii hore iyo kan cusub ee Soomaaliya.
Dadka ku geeriyooday weerarkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa labo caruur oo walaalo ah, kadib markii mid ka mid ah madaafiicdaasi uu kusoo dhacay guri ay deganaayeen oo ku yaala agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.